Ka 11, 2018 admin
Bank of Canada iji blockchain maka ntabi edozi ala
The ọhụrụ “Project Jasper” blockchain ọnwụnwa gosiri na ekesa ledgers ndị dị irè na automating ala niile na ezigbo oge, dị ka Bank of Canada na abụọ mmekọ na “integrated ala na ugwo mmezi” oru ngo.
Gerry Gaetz, president na CEO nke ịkwụ ụgwọ Canada, E kwuru, sị:
“Nke a na-egosi na ọ bụ omume na-anapụta ego na a ụzọ na mgbe e mere tupu – site na swapping ego si azụ ahịa na-ere ákwà na, n'ihi na ozugbo niile.”
Korean mgbanwe Upbit wabara site prosecutors
Ọkàiwu gọọmenti na South Korea nwere kọrọ wabara kasị cryptocurrency mgbanwe na mba, UPbit. Investigators si prosecutors’ ụlọ ọrụ nke Seoul chọọ isi ụlọ ọrụ nke mgbanwe na May 10th.
UPbit na-enyo enyo nke wayo maka kwuru na-ere cryptocurrency ahịa na ọ dịghị n'ezie jide, dị ka akụkọ.
The prosecutors’ ụlọ ọrụ kwuru, sị: “Anyị nwetara ike diski na-aza ajụjụ akwụkwọ site siizi. Analysis na-atụ anya ka ụbọchị.”
Huawei agụnye Bitcoin wallet ngwa na ya na ngwa ahịa
Ọrụ nke Huawei phones ga-enwe ike ibudata Bitcoin wallets na ha na ngwaọrụ na nke mbụ na-amalite Friday.
Huawei, ụwa na-atọ nnukwu handset onye, na-atọhapụ BTC.com si Bitcoin wallet ya AppGallery, DỊ ka Alejandro de la Torre, BTC.com osote onyeisi oche nke azụmahịa arụmọrụ.
O kwuru, sị AppGallery ga-eji arụnyere na niile ọhụrụ Huawei phones.
The aga ga-abụ na nwere ọtụtụ ezinụlọ na Chinese ahịa, ebe Huawei bụ nnukwu mobile ekwentị-ere ákwà na. The Chinese ọchịchị nkanka Android si Google Play Store na ụfọdụ ngalaba nke Apple si iTunes, ịmachi ohere ngwa ọdịnala dị ka BTC.com si. Mgbe China ka mechie cryptocurrency trading nyiwe, ndị mmadụ nwere ike ka na-mebere ego.
"Ọ bụ ezigbo ohere enweta n'ime Chinese ahịa,"De la Torre kwuru na a ekwentị Ajụjụ ọnụ. "The ojiji nke cashless ịkwụ ụgwọ na ngwa ọdịnala bụ nnọọ nnukwu na omenala ichekwa ego na bank usoro kọrọ, otú e nwere bụ a ọma ikpe n'ihi na kaadị ịkwụ ụgwọ na-eto eto n'ebe ahụ. "
Ònye mere nnukwu onyinye kaadị ụlọ ọrụ? Top 7
Ọ bụrụ na ị itinye a ọtụtụ ...
Previous Post:Trading Bots maka Cryptotrading
Next Post:kaadị-eto Eto